Kurume 21: Zuva reNhetembo reNyika | Zvazvino Zvinyorwa
Kurume 21: Zuva reNhetembo reNyika
Carmen Guillen | | Type, Nhetembo
Nhasi, Kurume 21, iyo International nhetembo zuva asi unoziva here kuti zvakatanga sei? Wanga uchiziva here kuti nhetembo dzisati dzafungidzirwa kuve iko kunyorwa kwekuumbwa uko, kunze kwekunyorwa mundima, kwaive nhetembo? Nhasi tinogona kunakidzwa nemhando dzakasiyana dze nhetembo, asi sekune zvimwe zvinhu zvakawanda, zvaisave zvakadaro nguva dzose.
1 Kuongorora nhetembo
1.1 Kuyera kwendima
1.2 Madudziro acho
2 Yakakurudzira mabhuku enhetembo
3 Kusarudzwa kwenhetembo mbiri
Nhetembo mabhuku mundima uye ane nhevedzano yehunhu hunosiyanisa zvakanyanya kubva kune wakajairika uye mutauro wakajairika. Hunhu hwayo ndeinotevera:
La graphic dhizaini uye mabhureki: Nhetembo yakanyorwa yakateedzana yezvikamu zvinonzi mavhesi. Imwe yeiyi mavhesi ine mutsetse wakazvimiririra, uye kumagumo kwendima yega yega, pane kumbomira kunofanirwa kuitwa kana uchiverenga
El ritmo: Mune nhetembo mimhanzi inoita basa rakakosha. Tichadaidza mutinhimira uyu. Kunzwa kwemimhanzi mundima iyi kunoenderana nekudzokororwa kwezvinhu zvakasiyana zvinoita mita yemudetembo. Zvinonyanya kuzivikanwa ndezvi: chiyero chemavhesi, matauriro uye mutinhimira.
Vananyanduri vanowanzove nechokwadi chekuti mitsara iri munhetembo dzavo ine huwandu hwakati hwenyaya. Kudzokororwa kwesyllable system iyi kunogadzira rwiyo rwekuita iyo inounza kumwe kurira kune zvinyorwa kana ichiverengwa.
Kudzokororwa kwemazwi enzwi pamasiraire akafanana mundima imwe neimwe kunogadzira ratidziro. Izvo hazvidi kudzokororwa mundima yega yega yega kuti mimhanzi iitike.
Tinodaidza mutinhimira kudzokororwa kwemitumo panoperera mavhesi maviri kana anopfuura. Kana kudzoreredzwa uku kukabata manzwi ese kubva kune yekupedzisira vimbiso yakasimbiswa yendima, nhetembo iri konzonendi. Kana ichingobata mavhawero chete kwete makonzonendi, mutetetedzo ndiwo assonant.
Kune rimwe divi, ndedzipi tsamba idzi dzinoiswa padivi pevhesi yega yega? Iwo mavara anoiswa apo isu tichazopenengura metric system ine nhetembo uye ichaiswa chete mundima idzo nhetembo. Tsamba iyi idiki kana vhesi iine mavara mashoma masere. Naizvozvo, inozopihwa capitalized kana iine 8 kana mamwe mazwi. Mundima idzo dzisinganetsi, tambo ichaiswa.
Nhetembo zhinji dzazvino dzine nhetembo dzemahara asi dzaimbove dzese kana dzinenge dzese nhetembo dzainge dzakanyorwa nhetembo mune dzimwe ndima dzadzo. Izvi zvakawedzera imwe degree yedambudziko rekusika kwekunyora, sezvo nyanduri aifanira kutsvaga mazwi enhetembo uye kuachinjanisa kurwiyo rwake.
Yakakurudzira mabhuku enhetembo
Nezuva reNhetembo reNyika tinoda kutora mukana wekukurudzira mamwe mabhuku enhetembo aungade. Parizvino, ivo havana kukosheswa zvakanyanya semanyorerwo uye zvimwe zvinyorwa zveprose, asi kana iwo hunhu hausi wakaderera kana zvisikwa zvavo zviri nyore ...
Chero bhuku renhetembo raunogona kuverenga kubva Mario Benedetti, Pablo Neruda, Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Cesar Vallejo, Gabriela Mistral o Jaime Gil de Biedma, ivo vanokurudzirwa kwazvo nesu. Iwo echinyakare saka zvakanaka kuti urasike pane imwe nguva yehupenyu.
"Rudo nekusemesa" de Miss Bebi: Kana iwe uri mudiki uye uchida nhetembo, unogona kuda bhuku iri zvakanyanya. Yakagadziriswa naFrida editions uye ine mapeji makumi maviri nemaviri. Misoro yakadai sevakadzi, vechidiki, rusaruro, nezvimwewo, inogarwa pakati pevhesi nendima.
"Nyaya inosuruvarisa nezve muviri wako pamusoro wangu" de marwan: Iri ibhuku rinotaura nezve "zvine hushamwari nzvimbo" uye "nharaunda dzemagariro", chishuwo chekusimudzira uye chishuwo chenyama, kuoma kwekuva nechokwadi nekunzwisisa pakati pezviviri, uye nekuwedzera, kusiririsa kure kururamisira kwevanhu. Bhuku rinokurudzirwa zvakanyanya kana iwe uchida kunakirwa nhetembo dzakanaka nedzazvino.
"Kunyarara kwezvikara" de Unai Velasco: Munyori awana iyo Mubairo weNyika weVadiki Nhetembo uye nezvake, juri rakati zvinotevera: "Bhuku rine hunyanzvi, rinobhejera nhetembo dzakakomba umo kupokana hakupesane nezvinyorwa zveavant-garde uye zvine mutsigo wakasimba mutsika nemunyorwa".
Kusarudzwa kwenhetembo mbiri
Zvakaoma kunyora chinyorwa chakakumikidzwa kuWorld Poetry Day uye kwete kunyora nhetembo dzenhambo dzakadai. Ndinokusiya uine vaviri vandinoda:
Zvaigona here kuti ndanga ndisingakuzive iwe
padhuze neni, ndakarasika mukutarisa?
Maziso angu airwadza nekumirira.
Kana kuoneka ipapo
nyika yechokwadi mawaigara!
Asi iwe wakapasa
Ndega, gare gare, kunze kwevatema kwakauya
Vanodonhedza hofori kubva mumasango kuti vavate,
vanodonha huchenjeri semaruva,
kuita chete murume nekunyara kwemurume.
Kuti ivo zvakare vaputse humambo hwehusiku humwe,
hazvireve chero chinhu;
iyo inodonhedza pasi maziso, inodonhedza maoko sezvidhori
Asi rudo urwu rwakavharwa kuti rione chete chimiro charo,
chimiro chayo pakati petsvuku tsvuku,
inoda kumanikidza hupenyu, kunge mwaka wematsutso uchikwira wakawanda kudaro
kuenda kudenga rekupedzisira,
miromo yavo inopa dzimwe nyeredzi,
uko maziso angu, aya maziso,
vanomuka mune imwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Kurume 21: Zuva reNhetembo reNyika
Harry Hole. Makore makumi maviri nemupurisa anokwezva kubva kuna Jo Nesbø. INOKOSHA
Bettý, Sylvia naLaura. Vakadzi vatatu vanouraya kwenguva nhatu